Barashada Freemium Beddelka Macnaheedu Waa In Aad Loo Adkeeyo Falanqaynta Alaabta | Martech Zone
Isniin, April 26, 2021 Isniin, April 26, 2021 Jeremy Levy
Haddii aad hadlaysid Rollercoaster Tycoon ama Dropbox, qurbaanno freemium sii ahaansho hab guud oo lagu soo jiito isticmaaleyaasha cusub macaamiisha iyo alaabada barnaamijyada si isku mid ah. Markii lagu rakibo barxadda bilaashka ah, isticmaaleyaasha qaarkood ugu dambayn waxay u beddelayaan qorshooyin lacag leh, halka kuwa badan oo kalena ay ku sii nagaan doonaan tier bilaash ah, oo ay ka kooban yihiin hadba astaamaha ay heli karaan. Research mowduucyada ku saabsan beddelka freemium iyo sii-haynta macaamiisha waa kuwo badan, shirkadahana waxaa si isdaba joog ah loogu xujeynayaa inay sameeyaan xitaa horumar sii kordhaya oo ku saabsan beddelka freemium. Kuwa u istaagi kara inay kasbadaan abaalmarinno muhiim ah. Isticmaalka wanaagsan ee falanqaynta alaabta ayaa ka caawin doonta iyaga inay halkaas gaaraan.
Isticmaalka Muuqaalka ayaa sheegaya Sheekada
Mugga xogta ka imaaneysa isticmaaleyaasha softiweerku waa wax lala yaabo. Astaamo kasta oo la isticmaalo inta lagu jiro kalfadhi kasta waxbay noo sheegaysaa, iyo wadarta barashadaas waxay ka caawineysaa kooxaha wax soo saarka inay fahmaan safarka macmiil kasta, iyagoo ka faa'iideysanaya falanqaynta wax soo saarka ee ku xiran bakhaarka xogta daruurta. Xaqiiqdii, mugga xogta waligeed runti ma aheyn arrin. U siinta kooxaha wax soo saarka helitaanka xogta una suurta galisa inay weydiiyaan su'aalo iyo soo uruuriyaan aragtiyo ficil ah - taasi waa sheeko kale.
In kasta oo suuqleyda ay adeegsanayaan barnaamijyo falanqeyn ololeyn la aasaasay iyo BI dhaqameed ayaa diyaar u ah in ay eegaan xoogaa jaangooyooyin taariikhi ah, kooxaha wax soo saarku badiyaa si fudud malahan karaan xogta si ay u weydiiyaan (oo ay uga jawaabaan) su'aalaha safarka macaamiisha ee ay doonayaan in ay raacaan. Waa maxay astaamaha inta badan la isticmaalo? Goorma ayuu adeegsiga muuqaalka u muuqdaa inuu hoos u dhacayo ka hor inta aan la kala bixin? Sidee ayay isticmaaleyaashu uga falceliyaan isbeddelada xulashada astaamaha heerarka bilaashka ah iyo kuwa la bixiyo? Falanqaynta wax soo saarka, kooxuhu way waydiin karaan su'aalo wanaagsan, dhisaan mala awaal wanaagsan, tijaabiyaan natiijooyinka isla markaana si dhakhso leh u hirgeliyaan isbeddelada wax soo saarka iyo Roadmap-ka.
Tani waxay keenaysaa faham aad u xeel dheer oo ku saabsan saldhigga isticmaalaha, taas oo u oggolaanaysa kooxaha wax soo saarka inay eegaan qaybaha adeegsiga muuqaalka, intee in le'eg ayay isticmaaleyaashu haysteen barnaamijka ama inta jeer ee ay isticmaalaan, muuqaalka caanka ah iyo in ka badan. Tusaale ahaan, waxaad ogaan kartaa in adeegsiga muuqaal gaar ah uu si xad dhaaf ah uga dhex muuqanayo dadka isticmaala heerarka bilaashka ah. Marka u wareeji muuqaalka shax mushahar leh oo cabir saameynta labada casriyayn ee heerka lacagta iyo heerka lacag la’aanta ah. Qalab dhaqameed BI ah ayaa keligiis soo gaabin doona falanqaynta degdegga ah ee isbeddelka noocaas ah
Hadafka heerka bilaashka ah ayaa ah in la wado tijaabooyin u horseedaya ugu dambeyn casriyeyn. Isticmaalayaasha aan u cusbooneysiinin qorshaha lacag bixinta ayaa weli ah xarun kharash ama si fudud uga baxa. Midkoodna ma abuuro dakhliga rukunka. Falanqaynta alaabtu waxay saameyn togan ku yeelan kartaa natiijooyinkan labadaba. Isticmaalayaasha kala baxa, tusaale ahaan, kooxaha wax soo saarka ayaa qiimeyn kara sida alaabada loo isticmaalay (hoos ilaa heerka muuqaalka) si ka duwan u kala duwan isticmaalayaasha si dhakhso leh uga soo horjeeday iyo kuwa ku mashquulsan waxqabadka qaar muddo ah.
Si looga ilaaliyo inay si deg deg ah uga baxaan, isticmaaleyaashu waxay u baahan yihiin inay arkaan qiimaha degdegga ah ee sheyga, xitaa heerka bilaashka ah. Haddii astaamaha aan la isticmaalin, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in cilladda barashada qalabka ay aad ugu sarreyso dadka isticmaala qaarkood, taasoo yareyneysa fursadaha ay waligood ugu beddeli doonaan heerka lacagta la bixiyo. Falanqaynta alaabtu waxay ka caawin kartaa kooxaha inay qiimeeyaan adeegsiga muuqaalka isla markaana abuuraan khibrado wax soo saar wanaagsan oo u badan inay horseed u noqdaan beddelaad.
Iyadoo aan la helin falanqaynta wax soo saarka, way adkaan laheyd (haddii aysan macquul aheyn) kooxaha wax soo saarka inay fahmaan sababta ay isticmaaleyaashu uga baxayaan. Dhaqanka 'BI' uma sheegi doono wax ka badan inta isticmaaleyaashu ka baxeen, runtiina ma sharxi doono sida iyo sababta waxa ka dhacaya daaha gadaashiisa.
Isticmaalayaasha ku sii jira shaxda bilaashka ah ee sii wadaya isticmaalka astaamaha xaddidan waxay keeneen caqabad ka duwan. Way cadahay in adeegsadayaashu ay khibrad u leeyihiin sheyga. Su’aashu waxay tahay sidee looga faa’iideysan karaa xiriirkooda jira iyo u wareeji heerka mushahar bixinta. Kooxdan dhexdeeda, falanqaynta alaabtu waxay gacan ka geysan kartaa in la aqoonsado qaybo kala duwan, oo ka bilaabma adeegsadayaasha aan caadiga ahayn (oo aan ahayn mudnaan sare) kuwa isticmaala ee riixaya xadka marin-u-helkooda bilaashka ah (qayb wanaagsan oo diiradda la saarayo marka hore) Kooxda wax soo saarku waxay tijaabin karaan sida isticmaaleyaashani uga falceliyaan xaddidyada dheeraadka ah ee marin-u-helkooda bilaashka ah, ama kooxdu waxay isku dayi kartaa istiraatiijiyad isgaarsiineed oo ka duwan si loo muujiyo faa'iidooyinka heerka lacagta la bixiyey. Labada dhinacba, falanqaynta alaabtu waxay awood u siineysaa kooxaha inay raacaan safarka macaamiisha isla markaana ku celceliyaan waxa ka shaqeynaya guud ahaan isticmaaleyaasha.
Keenida Qiimaynta Dhamaan Safarka Macaamiisha
Maaddaama badeecaddu u fiicnaato isticmaaleyaasha, qaybaha wanaagsan iyo shakhsiyaadka ayaa si muuqata u muuqda, iyagoo siinaya aragti ololeyaal soo jiidan kara macaamiisha muuqaalka leh. Maaddaama macaamiisha ay u adeegsanayaan softiweerka waqti ka dib, falanqeeyayaasha badeecaddu waxay sii wadi karaan inay ka soo xaabtaan aqoonta xogta isticmaaleha, iyagoo khariideynaya safarka macaamiisha illaa kala-bixidda. Fahmitaanka waxa soo rogaya macaamiisha oo cabaada — astaamaha ay sameeyeen iyo kuwa aan isticmaalin, sida isticmaalka waqti ka dib isu beddeleen - waa macluumaad qiimo leh.
Maaddaama la aqoonsaday shakhsiyaadka halista ku jira, tijaabi si aad u aragto sida fursadaha hawlgelinta ee kala duwan ay ugu guuleystaan ​​in dadka isticmaala ay ku sii hayaan ayna u keenaan qorshooyin lacag leh. Sidan oo kale, gorfayntu waxay ku qumman tahay wadnaha guusha wax soo saarka, taasoo kicinaysa hagaajinta muuqaalka taasoo horseedaysa macaamiil badan, gacan ka geysashada sidii ay u sii haysan lahaayeen macaamiisha jira muddo dheer iyo dhisidda khariidad wax soo saar wanaagsan oo loogu talagalay dhammaan isticmaaleyaasha, hadda iyo mustaqbalka. Falanqaynta alaabada ee kuxiran bakhaarka xogta daruuraha, kooxaha waxsoosaarku waxay leeyihiin aaladaha si ay uga faa'iidaystaan ​​ugu badnaan xogta si ay u waydiiyaan su'aal kasta, u sameeyaan mala-awaal una tijaabiyaan sida isticmaaleyaashu uga jawaabaan.
Tags: rukhsadaha halista ku jirasirdoonka ganacsigabakhaarka xogta daruurtaSafarka macaamiishashirkad ganacsitier bilaash ahFreemiumbeddelaad freemiumtier mushahar lehsaasrukummada barnaamijkaMacmiil
Jeremy Levy ayaa isla aasaasay tilmaan la saaxiibka iyo horseedka warbaahinta bulshada Andrew Weinrich ka dib markii la ogaaday baahida loo qabo xogta macaamiisha oo tayo leh inta ay socoto MeetMoi, oo ah barnaamij shukaansi goob ku saleysan oo ay ka iibiyeen Match.com. Labadan shaqsi ayaa sidoo kale aasaasay Xtify, oo ah qalab ogeysiis moobil ah oo ay ka iibiyeen IBM.